Ciidamadda Somalia oo burburay Saldhigii ugu waynaa ee Alshabaab ay ku lahaayeen Koonfurta Somalia. – Hornafrik Media Network
Ciidamada DFS ee sida gaar ah u tababaran oo kaashanaya saaxiibadeenna caalamka ayaa saaka aroortii burburiyay saldhig ay kooxda #Nabad iyo #nolol diidka ah ku lahaayeen meel u dhaw Saakoow.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed cabdullaahi Farmaajo oo weerarkan warsaxaafadeed kasoo saaray ayaa yiri
“Saaka aroortii, waxaan amray in ciidamadeenna gaarka ah oo kaashanaya saaxiibadeenna caalamka in ay weerar ku qaadaana xarun tababar oo ay kooxda argagixisada ah ee al Shabaab ku lahayd meel u dhaw Degmada Saakoow ee Gobolka Jubbada Dhexe.”
“Weerarkan oo ah ahaa mid guul ku dhammaaday ayaa lagu burburiyay xarun tababar oo muhiim u ahayd hawlaha amni darro ee ay kooxdan soo abaabusho. Tani waxay wiiqaysaa awoodda cadowga uu kusoo abaabuli karoweerarro cusub.”
“Markii aan xafiiska la wareegay, waxaan sheegay in maamulkayga uu ahmiyad sare siin doono amniga. Weerarkan wuxuu sare u qaadayaa amniga iyo xasilloonida dalka, wuxuuna yareynayaa khatarta ay kooxda al Shabaab ku hayso dadka Soomalaiyeed.”
Dowladda Federalka oo kaashanaysa saaxiibadeenna caalamka waxay qaadeysaa tallaabo kasta oo looga hortagayo in hawlgallada noocan ah aysan wax dhibaatada ah kasoo gaarin dadka shacabka ah.
Waxaa laga codsanayaa shacabka Soomaaliyeed in ay hay’adaha amniga kala shaqeeyaan sidii dalka looga sifeyn lahaa kooxdan usoo tafa xaydatay dhibaateynta shacabka Soomaaliyeed.